Xarunta Kala-guurka ee Robbinsdale - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Robbinsdale Transition Center (RTC) waa barnaamij waxbarasho gaar ah oo u adeegta dhalinyarada qaangaarka ah, ee da'doodu u dhaxayso 18-21 ee qaata adeegyada waxbarashada gaarka ah. Ardaydeena waxay leeyihiin kartiyo kaladuwan waxayna ubaahanyihiin caawimaad si looga gudbo iskuulka uguna wareego nolosha bulshada. Ardayda waxaa loo gudbiyaa RTC dugsiga aaga ay dhigtaan ee dugsiga sare.
RTC waxay ardayda siisaa fursado ay ku balaariyaan shaqadooda iyo xirfadahooda shaqsiyadeed, dhisaan isku kalsooni, iyo inay wax ka bartaan is-aqbalaada iyo u-doodiddooda, sida ku qeexan Qorshahooda Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP).
Barnaamijku wuxuu diiradda saarayaa saddex meelood oo kala-guurka waxbarashada gaarka ah.
Waxbarashada dugsiga sare iyo tababarka
Shaqaalaha RTC waxay ardayda ku xiraan ilaha bulshada ee meelaha kala guurka ah, sida fasallada dugsiga sare iyo dugsiga sare kadib, adeegyada dhaqan celinta, adeegyada bulshada, iyo tas-hiilaadka dhaqanka iyo madadaalada bulshada.
Si uu uga qayb galo barnaamijkan, ardaygu waa inuu:
Noqo da'da 18-21;
Uqalanto adeegyada waxbarashada gaarka ah;
Kooxda IEP waxay go'aamiyeen inay sii socdaan baahiyaha kala guurka.
RTC Main: 763-504-8619
Fakiska RTC: 763-504-8970
Dugsiyada Robbinsdale Area iskuulku ma taageerayo ama ma kafaala qaadayo mid ka mid ah ilaha ku taxan.
Faa'iidooyinka Naafada 101
Xarunta Metropolitan ee Nolosha Madaxa-bannaan
Waaxda Waxbarashada ee Minnesota
Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota
Xarunta Sharciga Naafada ee Minnesota
Barnaamijka STAR STAR
Minnesota DEED Job Seekers
Xarunta Teknolojiyada Simon
Macluumaadka Xarunta Taakulaynta Ardayda
Himilada: Ka qaybgal qoyska iyo wada-hawlgalayaasha bulshada si ay u taageeraan baahiyaha ardayda iyo qoysaska adoo siinaya taageero kala duwan inta lagu jiro Barashada Fogaanta iyo moodooyinka isku dhafan, oo ay ku jiraan taageerada tacliinta, taageerada bulshada / shucuurta iyo caafimaadka maskaxda, iyo ku xiridda ardayda iyo qoysaska ilaha bulshada.
Taageerada ardayda waxaa ku jiri doona adeegyo umeerin (shaqsi ahaan iyo ku dhowaadba EA iyo tabaruceyaal), caafimaadka maskaxda iyo taageerooyinka caafimaadka kiimikada, helitaanka lataliyeyaasha, shaqaalaha bulshada, cilmu-nafsiga iskuulka, kalkaaliyayaasha, taageerada tiknoolajiyada, iyo isku xirnaanta dhaqanka iyo khubarada cimilada. Dhammaan booqashooyinka shakhsi ahaaneed waxay noqon doonaan ballan kaliya.
Taageerada qoysaska waxaa ku jiri doona helitaanka macluumaadka ku saabsan sida loo helo ilaha sida taageerada cuntada, taageerada tiknoolajiyada, caafimaadka maskaxda iyo taageerada caafimaadka kiimikada, Fasalada Waalidiinta In Bulshada.
Qoysaska filaya ama daryeelaya cunug min dhalashada ilaa fasalka saddexaad waxay la xiriiri karaan Waalidka iyo Baaraha Qoyska oo shati haysta si ay u taageeraan. Booqashada mid-ka-qof ee bilaashka ah ayaa loo qorsheyn karaa si loo wadaago macluumaadka ku saabsan horumarka ilmaha iyo ilaha bulshada ee mowduucyada sida dejinta jadwalka caadiga ah, qaababka wanaagsan ee lagu hago ilmahaaga, xiriirka qoyska, iyo wada xiriirka. Jadwal u samee booqashada khadka tooska ah , wac 763-504-4170, ama emayl u dir ECFE_281@rdale.org wixii macluumaad dheeraad ah.
Booqashada qof ahaaneed waxay noqon doontaa ballan kaliya. Nidaamyada amniga soo socda ayaa loo baahan yahay in la raaco:
Haddii aad xannuunsan tahay oo aad la kulantay astaamaha soo socda midkood, gurigaaga joog oo ha iman dhismaha.
Ama haddii aad la kulantid ugu yaraan laba ka mid ah kuwan soo socda, guriga joog oo ha u iman dhismaha:
Qandho (100.4 ama ka sareeya)
Calaamadaha caloosha iyo mindhicirka ee shuban, matag, ama lallabo.
Shakhsiyaadka galaya dhismaha waa inay xirtaan weji daboolan.
Dadka waaweyni waxay u baahan doonaan inay saxeexaan oo muujiyaan lambar taleefan.
Ka soo gal dhismaha iridda weyn.
Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsiga
U diritaanka taageerada caafimaadka maskaxda waxaa lagu samayn karaa shaqaalaha sooshalka ama ardayda qaangaarka ah / qoysaska waxay la xiriiri karaan 'Central Incorporated's Central Access at People Incorporated Central Access 651-774-0011.
Mary Yu, shaqaalaha sooshalka ee iskuulka, waxaa lagu heli karaa balan, Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 3 galabnimo Waxay awoodi doontaa inay lashaqeyso ardayda iyo qoysaska iyadoo loo marayo balan balaaran iyo shaqsi ahaanba. Waxay sidoo kale awoodi doontaa inay taageerto qoysaska iyadoo ku xireysa ilaha bulshada. Fadlan jadwal ugu samee emaylka: Mary_Yu@rdale.org
Caawinta tacliinta iyo teknolojiyada waxaa lagu bixin doonaa si rasmi ah iyo ballan. Fadlan la xiriir maamulaha dacwada ardayga ama kaaliyeyaasha waxbarashada ee ka shaqeeya Xarunta Taageerada: Dottie_Gelting@rdale.org ama Gail_Hernz@rdale.org .
Caawinta tacliinta waxaa la heli karaa Isniinta ilaa Jimcaha, 7:30 subaxnimo ilaa 1:30 pm
Heidi Haines, MS, RN, Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Dugsi shati haysta, ayaa lagu heli karaa ballan, Isniinta ilaa Jimcaha, 8 subaxnimo ilaa 3 galabnimo Waxay awoodi doontaa inay taageerto caafimaadka ardayda RTC. Waxay diyaar u noqon doontaa inay ka caawiso qoysaska u doodista ilaha caafimaadka iyo ka caawinta su'aalaha caafimaadka. Fadlan jadwal ugu samee emaylka, Heidi_Haines@rdale.org
Soo qaad Xadhig Xirmo Bilaash ah
Codso Faa'iidooyinka Waxbarasho (Cunnooyinka Bilaashka ah / La Dhimay)
Taageerada Teknolojiyada & Dhibaataynta
Haddii aad u baahan tahay taageerada tiknoolajiyada, dooro mid ka mid ah xulashooyinkaas:
Buuxi Foomka Codsiga Taageerada Tech
Email TechSupport@rdale.org (ku dar magaca ardayga, macluumaadka xiriirkaaga iyo baahida taageerada tiknoolajiyada)
Ka wac 763-504-4925
Goobaha dhibcaha waxaa la siin karaa qoysaska aan hadda haysan adeeg internet oo tayo leh; fadlan buuxi foomka codsiga kulkulul .
Qoysasku waa inay sii wadaan inay raacaan Heshiiska Adeegsiga Qoyska ee Degmada iyo nidaamka isticmaalka la aqbali karo.
Sida Loo Dejiyo Qalabkaaga RAS
Helitaanka Internetka & WiFi (Kheyraadka Bulshada)
Xariirka Waalidiinta: Waa maxay Xariirka Waalidka?
Aqoonyahan (fasalada 4aad ilaa 12aad)
Gawaarida Keyboard ee Chromebook
Chromebook ma daari doono
Shaashaa barafaysan oo ku taal Chromebook
Sida loo nadiifiyo Kaydkaaga
Xidhiidhada ama Bogagga aan Waxba Daranayn? (Khalad Ergeyga Wakiilka )
Cusbooneysiinta Chromebook-kaaga (Sida Loo Wado )
Chromebook (Seesaw, 3aad )
Chromebook (Aqoonyahan, 4-12)
iPad Care iyo Furitaanka Wakiilka Furan (Ingiriis)
iPad Care iyo Furitaanka Wakiil Saxeex (Isbaanish)
Ipadka Daryeelka iyo Furitaanka Wakiilka Furan (Soomaali)
Helitaanka Internetka (Ingiriis & Isbaanish)
Helitaanka Internetka (Soomaali) (Cusbooneysiin Goor Dhow)
Xariirka Waalidka waa magaca akoonka waalidka ee Schoology iyo Infinite Campus labadaba. Isla username iyo password ayaa loo isticmaali karaa labada nidaam.
Kaamamka aan dhamaadka lahayn
Gudaha Infinite Campus, qoysasku waxay: Xaqiijin karaan darajooyinka ugu dambeeya iyo dhibcaha, fiiri karaan jadwalka & qoraalada, xaadiritaanka ardayda, caafimaadka iyo macluumaadka akhlaaqda, isku dheelitirka akoonka cuntada, macluumaadka baska / gaadiidka
Waa isha koowaad ee ilaa iyo fasalada ardayda. Waxa kale oo ku jira macallinka iyo cusboonaysiinta dhismaha, shaqooyinka, wada hadalada iyo waxyaabo kaloo badan.
Sida Loo Helo Xariirka Waalidka (Soo Galida IWM)
Su'aalaha Weyn ee Waalidka
Sida Loogu Soo Galo
Waa maxay Seesaw? Hordhaca Ardayda
Waa maxay Seesaw? Qoysaska
Caawinta barnaamijyada Seesaw (oo ay ku jiraan barnaamijka qoyska)
Ardayda hordhaca ah ee degdega ah ee muujineysa sida loo diro Meeleynta, looga qeyb qaato Doodaha, loona qaato Qiimeynta.
Liistada Ciyaarta Kheyraadka Waalidka ee Video-ga ah ee laga soo qaatay Schoology
Wareejinta taleefanka (Waalidiinta)
Wareejinta kumbuyuutarka (Waalidiinta)